काठमाडौंबाट नक्कली डिएसपी पक्राउ – Kavrepati
Home / Uncategorized / काठमाडौंबाट नक्कली डिएसपी पक्राउ
admin June 15, 2021	Uncategorized Leaveacomment 288 Views
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले एक नक्कली डिएसपीलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानालाईसोमबार पक्राउ गरेको हो।महाशाखामा उनी बिरुद्ध उजुरी परेको थियो।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुँदै नभएको पदमा आफू छु भन्दै भ्रम छरेको उजुरीपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो।महाशाखाको टोलीले कृष्णप्रसादले तारकेश्वरमा संचालन गरेको भिक्टोरिया फार्मेसीबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार उनले नेपाल प्रहरीको कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरीको डिएसपी र सशस्त्र प्रहरीको कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको डिएसपी हुँ भन्ने गरेका थिए।।
अन्य समाचार : लगातारको वर्षाले कुन-कुन नदिमा बढ्यो पानी, कहाँ छ खतरा ? यस्तो छ २४ घण्टे चेतावनी काठमाण्डौ । लगातार दुई दिन देखि भइरहेको वर्षाका कारण देशका विभिन्न नदी र खोलामा बाढी आएको छ ।
लगातारको पानीले केही नदीहरुमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढेका कारण डुवान र वाढी र खतरा बढेकोे छ । नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा कास्कीको लुम्ले र चितवनको चर्खरेमा जोखिम बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
दुई दिनको वर्षाले कालीगण्डकी, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, भेरी र यसका सहायक नदी जलाधार लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चुरे र तराई भइ बहने केही साना नदीमा पनि बहाव उल्लेख्य बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । पर्सि बिहीवारसम्म यी नदीहरुका तटीय क्षेत्रहरुमा विशेष सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ ।
गएको जेठ २८ गते मनसुन भित्रिएसँगै देशभर लगातारजसो पानी परिरहेको छ । यो हप्ता मनसुन सक्रिय भइ देशभर पानी पर्ने हुँदा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ । आज पनि देशका धेरै ठाउँहरुमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश(२, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँहरुमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । यी प्रदेशमा पर्ने नदीमा बाढी पहिरो आउनसक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन विभागको अनुरोध छ ।
Previous यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो !
Next खोप लगाएपछि यसकारण शरीरमा फलाम टाँसिदो रहेछ, डा. कल्याण सुवेदीले खोले रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस्)